डरले नै मानिसलाई सफल बनाउने हो  HamroKatha
डरले नै मानिसलाई सफल बनाउने हो
चाणक्य नीतिबाट धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ !
अधिकांस मानिस जीवनलाई क्रमिक रुपमा सफलता उन्मुख बनाउन कुनै ठोस प्रयासको साहस गर्दैनन । जीवनमा कुनै किसिमको खतरा उठाउन खोज्दैनन अथवा कुनै ठुलो चुनौतीलाइ स्विकार्दैनन। जीवन जस्तो चलिरहेको छ बस त्यसमै सन्तुस्ट रहन्छन। केवल जसरी बाचिरहेका छन त्यस्तै गरि बाचिरहनछन।
हाम्रो कथा २०७५ माघ २२ गते १७:०३
एक दिनको कुरा हो । जब; चन्द्रगुप्त एकजना सिकारीको युद्द चुनौतीबाट पछि हट्छ । जुन कुरा उसको गुरु चाणक्यले चाल पाउछन् । अनि चन्द्रगुप्तलाई चाणक्यले प्रश्न गर्छन, “तिमी किन त्यो सिकारीको चुनौतीबाट पछि हटेको ?”
तब; चन्द्रगुप्त भन्छ, “यदि मैले सिकारी संगको युद्द हारेको भए ! यहि हारको डर नै मेरो रुकावट हो।” तब चाणक्य भन्छन ‘’यहि डरले नै तिमीलाई बिजय पनि दिलाउँछ।”
चाणक्य नीति अनुसार, जो व्यक्तिले जीवनको डरलाई गम्भीरता पुर्वक लिन्छ, त्यो व्यक्तिले जीवनमा सधै सफलता प्राप्त गर्छ । परिस्थिति (नियति) ले त सधै सुखको नै चाहना राख्छ, सधै सफलता नै खोज्छ। तर त्यहि अनुरुप सुख अथवा अधिक वा भनौं ठुलो सफलता प्राप्त गर्न त्यहि अनुरूपको प्रयास आवस्यक रहन्छ। ठुलो सफलताका निम्ति ठुलै चुनौती उठाउनु पर्ने हुन्छ।
अधिकांश मानिस जीवनलाई क्रमिक रुपमा सफलता उन्मुख बनाउन कुनै ठोस प्रयासको साहस गर्दैनन । जीवनमा कुनै किसिमको खतरा उठाउन खोज्दैनन अथवा कुनै ठुलो चुनौतीलाइ स्विकार्दैनन । जीवन जस्तो चलिरहेको छ, बस ! त्यसमै सन्तुष्ट रहन्छन । केबल जसरी बाचिरहेका छन त्यस्तै गरि बाचिरहन्छन् ।
तर जो आफ्नो धरातल भन्दा माथि उठ्न चाहन्छ । प्रगति गर्न चाहन्छ अथवा सफलता प्राप्त गर्न चाहन्छ । जुन सफलताका निम्ति उक्त व्यक्ति आफुसंग भएका सबै कुरा दाउ लगाउन पछी पर्दैन । उसका निम्ति आफुसंग रहेका हरेक कुरा भन्दा उसले चाहेको प्रगती या सफलता नै उसका निम्ति सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यो व्यक्ति असफल पनि हुन सक्ला । उसको सफलता उन्मुख प्रयास मा सफलताको कुनै ग्यारेन्टी पनि छैन । यद्यपि उसकोको त्यो केहि गर्ने या गरेर देखाउन खोज्ने प्रयासले नै उसलाई अरु मान्छे भन्दा फरक बनाउछ। अन्तत: उ असफल भए पनि उसको जुन आन्तरिक सन्तुष्टि छ त्यो सन्तुष्टिलाई कसले खोस्न सक्छ र ? उसले केहि राम्रो गर्ने प्रयास त गर्यो । जीवनमा आत्म-सन्तुष्टि भन्दा ठुलो अरु कुनै सन्तुष्टि छैन।
१ घन्टा अगाडि ५८ सेकेन्डमा पढिने
३ घन्टा अगाडि १ मिनेटमा पढिने